Usizi Ngokufa Komntwana Ongakazalwa - Ukujamelana With Grief
Usizi Ngokufa Komntwana Ongakazalwa
Ukuba buhlungu ngokuswelekelwa ngumntwana osesibelekweni yindlela ethe cwaka yokufelwa. Nokuba umntwana usweleke kwangoko ekukhulelweni (ukuphuma kwesisu) okanye emva kwexesha lokukhulelwa (ukuzalwa komntwana oswelekileyo), ilahleko iyinyani kwaye ibuhlungu. Ukufumana iindlela ezisempilweni zokulilela usana olungekazalwa kunokuba ngumceli mngeni, kodwa nazi ezinye iingcebiso ezinokukunceda.
Ukuphuma kwesisu kwenzeka xa umntwana esifa esibelekweni ngaphambi kweveki yama-20 yokumitha. Inkqubo ye- Umbutho waseMelika wokukhulelwa Iingxelo zokuba malunga neepesenti ezili-10 ukuya ku-25 zazo zonke izinto ezikhulelweyo ezikhulelweyo ziphela ngokuphuphuma kwesisu, ngesiqhelo kwiinyanga ezintathu zokuqala zokukhulelwa. Unobangela wokuhamba kwesisu ngokufuthi awunakumiselwa. Ukuba ukhe waphunyelwa sisisu, zininzi iindlela onokuthi ube lusizi ngayo xa ulahlekelwe kwaye uqalise inkqubo yokuphilisa.
Iincwadi ngeNtlungu yomntwana oswelekileyo
Imifanekiso eli-10 yabantu abasokolayo kwintlungu
Igalari yeZipho zabaLilayo
Yamkele Indlela Ovakalelwa Ngayo
Ukuba ungumama, unokuzibona ulila kakhulu. Unokuziva unomsindo kuwe okanye kwabanye okanye uchithe ixesha elininzi uzama ukuqonda ukuba kutheni ukuphuphuma kwesisu kwenzeke. Unokufumana kunzima ukuba phakathi kwabasetyhini abakhulelweyo.
Thetha neqabane lakho
Nangona indlela iqabane lakho elibuhlungu ngayo ilahleko linokwahluka kwindlela olibuhlungu ngayo, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba iqabane lakho lisentlungwini. Ngokwe- Umbutho wezengqondo zaseMelika , Uya kuqaphela ukuba iqabane lakho kunokwenzeka ukuba linomsindo okanye licaphuke, libonakalise inkxalabo ngempilo yakho, kwaye lifune intuthuzelo kubomi bakho bokwabelana ngesondo. Ukuqonda indlela osabela ngayo iqabane lakho kunokukunceda uqonde ukuba iqabane lakho libuhlungu ngendlela oyiyo.
Bandakanya amanye amalungu oSapho
Ukuba wena neqabane lakho ninabanye abantwana, unokulindela ukujongana nemibuzo yabo malunga nokuba kutheni bengenalo umntakwabo okanye udade wabo njengoko bethembisile. Phendula imibuzo yabo ngokunyaniseka kangangoko. Unokufuna nokuthetha nonontlalontle wakho wasesibhedlele okanye umcebisi wentlungu malunga nezixhobo ezikhoyo zokunceda abantakwabo abasentlungwini.
Intlungu yokutshata ngaphandle komtshato iyinyani
Abanye abantu ababuqondi ubunzima bokusweleka kwesisu. Banokuziva ngathi ulilela kakhulu umntu ongenguye 'wokwenyani'. Banokuziva ngathi awukhulelwanga ixesha elide ukuba unokuba buhlungu njengoko unjalo. Nazi ezinye izinto wena (kwaye) kufuneka bazi malunga nokuchaphazela amandla osizi lomtshato:
Ubumfuna kangakanani umntwana
Kuthathe ixesha elingakanani ukuba ukhulelwe
Uxhaswa kangakanani emva kokuphuma kwesisu
Bomelele kangakanani ubuhlobo bakho nosana lwakho
Ukuba u zityhole yokuphuma kwesisu
Iintsuku ezibalulekileyo, njengomhla wokugqibela womntwana okanye uSuku loMama
Inkqubo ye- utshintsho lwehomoni ezenzeka xa umzimba wakho ubuyela kwimeko engakhulelwanga
Kungakhathaliseki ukuba ubude okanye ubude bokuphuphuma kwesisu, intlungu yakho iyinyani njengokuba usizi onokuziva xa ulahlekelwa ngumhlobo okanye omnye umntu obathandayo. Ngandlela thile, ukukhupha isisu kubi kakhulu, kuba akusoloko kukho umzimba wokulilela okanye inani elikhulu losapho kunye nabahlobo abalilayo nabo.
Ukukhathaza usana oluswelekileyo
Ukuzalwa kwakhona komntwana kwenzeka xa umntwana esweleka esibelekweni emva kweeveki ezingama-20 zokumitha. Ngokwe- Ikholeji yaseMelika ye-Obstetrics kunye neGynecology , malunga noku-1 kwabakhulelweyo abali-160 eUnited States baphela ngokuzalwa beswelekile. Inani elipheleleyo lokuzalwa komntwana e-United States ngonyaka ngamnye malunga nama-26,000.
Ukujongana nokulahleka nokungakholelwa
Ngelishwa, uninzi lwabasetyhini lufumanisa ngaphambi kokubeleka ukuba usana lwabo lufele esibelekweni. Oku kuthetha ukuba kufuneka banyamezele iintlungu zabasebenzi besazi ukuba, ekugqibeleni, bazakusishiya isibhedlele bengaphethe nto. Kwakhona, ukuba umntwana wakho wazalwa eswelekile, usenokuba umvile xa ehamba iiyure okanye imizuzu ngaphambi kokufa kwakhe. Oku kunokwenza kube nzima kuwe ukukholelwa ukuba umntwana wakho akasekho.
Akukho ' ubude bexesha elifanelekileyo Yintlungu. Ukuba buhlungu kuthatha ixesha elide. Uya kuba buhlungu ngendlela oba buhlungu ngayo; Akukho mntu unelungelo lokukuxelela ukuba ufanele ukwenze njani. Basenokungayiqondi indlela oziva ngayo. Ayingomsebenzi wakho ukuzenza; ngumsebenzi wakho ukuzikhathalela.
Abantwana abaswelekileyo bahlala beshiya izikhumbuzo zobomi babo obufutshane. Izibhedlele ezininzi zithatha uphawu lonyawo lwesandla okanye isandla somntwana oswelekileyo okanye uthotho lwemifanekiso oza kuyigcina. Izibhedlele zikwakhuthaza abazali babantwana abaswelekileyo ukuba bachithe iiyure ezininzi bebambe kwaye bezimanya nosana lwabo. Ukubonisa ezi zikhumbuzo kunokukunceda wamkele inyani yelahleko yakho kwaye uqale inkqubo yokulila.
Izithethe zasemva kokutshata
Ukuphuma kwesisu kuhlala kushiya ubungqina obuncinci bokuba umntwana ukhe walapho. Akukho mifanekiso ekufuneka uyijongile, ngaphandle kwe-ultrasound, akukho ndawo yengcwaba oza kuyindwendwela, kwaye akukho zinto zazithengiselwe umntwana njengengubo okanye ezalwa.
Abantu abaninzi bafumanise ukuba ukudala izikhumbuzo ezibonakalayo zomntwana kuluncedo. Oku kunokubandakanya:
Ukunika umntwana igama okanye ukusebenzisa igama lomntwana ukuba sele umnyulile,
Ukudala igadi ekhethekileyo yesikhumbuzo,
Khetha iintyatyambo ezinentsingiselo, nokuba kungamagama, uhlobo, umbala, okanye kwenyanga intyatyambo imele
Qiniseka ukuba wakha kwindawo yokuhlala, ke uya kuba nendawo bonakalisa
Ukubhalela ileta usana lwakho olungekazalwa,
Ukukhetha umbongo okanye ingoma ukukhumbuza umntwana.
Izithethe zasemva kokuphuma kwesisu zinika iindlela ezininzi ezibonakalayo zokuvalelisa kwaye ziqale inkqubo yokulila.
Ukudala iSikhumbuzo kwi-Intanethi
Abantu abaninzi bakhetha ukwenza isikhumbuzo kwi-Intanethi ukuhlonipha usana lwabo kwaye bancedise kwinkqubo yokulila.
An kwisikhumbuzo esikwi-intanethi ikuvumela ukuba wabelane nabanye ngentlungu yakho.
Ezinye zezikhumbuzo ezikwi-Intanethi zenzelwe ngokukodwa iintsana ezingekazalwa.
Ukuba unenkxalabo yokuba iwebhusayithi inokuhlala iye ezantsi, unokwenza iwebhusayithi kwaye wenze isikhumbuzo kwiindawo ezinje Weebly.com , Wix.com , Webs.com , okanye uninzi lwezinye iiwebhusayithi ezizezakho.
Izikhumbuzo ezikwi-Intanethi zikuvumela ukuba ukhumbule kwaye wenze ingxelo esisigxina yosana lwakho.
Kuxhomekeke kweliphi inqanaba lokukhulelwa owawukho xa waphulukana nosana lwakho, unokukhetha ukuba umngcwabo . Into ebaluleke kakhulu kukuba wenze into ocinga ukuba ikulungele. Ungabandakanyeka ngendlela obungathanda ukuba yiyo. Qiniseka ukuba uvumela iminqweno yakho yaziwe. Akukho lungisa okanye gwenxa apha. Ukuba ungathanda ukunceda ukunxiba umntwana wakho, kulungile. Ukuba awukwenzi oko, kulungile, nawe. Umngcwabo ngowakho ukuze ukwazi ukuqala inkqubo yokulila. Khetha ilitye eliyintloko elinombhalo onothando ukukhumbula ukusweleka kosana. Ndwendwela ingcwaba ukuba uyaziva kwaye uyihombise ngeentyatyambo, iithoyi, iileta kunye neminye iminikelo.
Nokuba ukwisiza, kwi-Intanethi, kwiqela, okanye umntu ngamnye, kubalulekile ukuba ufuna inkxaso yokukunceda kule lahleko. Kukho amaqela amaninzi anezahluko zendawo:
Imfesane Yabahlobo inezahluko ezingama-660 kulo lonke elaseMerika ngesahluko ngasinye sibonelela ngenkxaso yasimahla kubazali nakwamanye amalungu osapho aphulukene nomntwana nangasiphi na isizathu. Banikezela ngeeseshoni zokuncokola kwi-Intanethi kwabo bangasondelanga, okanye abangakwaziyo ukuya kwintlanganiso yesahluko. Jonga iiwebhusayithi zazo amaxesha.
Abazali abafelweyo eMelika ngomnye umbutho wenkxaso onezahluko kulo lonke elaseU.S. Le webhusayithi inezixhobo zokufunda, kwaye abazali abafelweyo banenkomfa yonyaka yamalungu osapho abantwana abalahlekileyo.
Ukuba ujonga ugqirha, i Umbutho waseMelika woMtshato kunye nabaNyanga bosapho ine-locator yokukunceda ufumane ingcali kwindawo yakho ekhethekileyo ekujonganeni nosizi. Unokufumana indawo yabo kwiwebhusayithi yabo. Unokujonga nakwiwebhusayithi yenkampani yeinshurensi yakho yezonyango ezigutyungelwe yinshurensi yakho.
Cwaka Intlungu ingaphezulu kwesiza esinezixhobo endaweni yenkxaso yobuqu, kodwa inecandelo lamanqaku likamama, utata, usapho, izihlobo, njl.
Emva kweNtetho iwebhusayithi apho ungagcina khona ungagcina ijenali yabucala, funda izixhobo, ubuze imibuzo yengcali, wenze isikhumbuzo, qala ibhlog onokwabelana ngayo nabanye, kwaye ufunde iibhlog zabanye.
Ukuphilisa iintliziyo yiwebhusayithi enentaphane yokuhanjiswa kwezinye izixhobo zentlungu. Inayo nenombolo yokuxhasa iiyure ezingama-24 kwangoko: 800-221-7437.
Ukuba ufuna inkxaso kwindawo yakho kwaye usenengxaki yokuyifumana, nxibelelana nesibhedlele. Izibhedlele zizixhobo ezilungileyo zeenkonzo zalapha ekhaya.
Ukuphulukana nosana ngaphambi kokuba kube nethuba lokuphefumla kubonakala ngathi akulunganga. Usizi, ukothuka, umsindo kunye nokonakala ziindlela zonke zendalo.
Ungafumanisa ukuba kuyanceda ukuyamkela intlungu okuyo ngokuthetha ngayo ebantwini abanokuyiqonda indlela oziva ngayo. Kuyanceda ukubandakanyeka kumasiko anentsingiselo ukubhiyozela ubomi bomntwana wakho esibelekweni-nangona kunjalo bufutshane obunokubakho. Ukuba iintlungu zokuphulukana nosana lwakho olungekazalwa zibonakala zinzima, kuya kufuneka usoloko ufuna ugqirha wakho okanye ugqirha wezempilo yengqondo.
Umtshato Trends Impazamo Ekhaya Uphuculo Ikrisimesi Imbali Njenesithethe Ngaphakathi Design Styles Ulutsha Impilo
Iimoto Nee Iimoto
umthi oneentyatyambo ezipinki nezimhlophe
Isinxibo somtshato waselwandle umama womtshakazi
oonobangela abakhokelela ekufeni kwinqanaba lokufikisa
umntwana ozelwe kwiiveki ezingama-33 okulindelekileyo
zingaphi iikharati ekufuneka zibe yiringi yokuzibandakanya
ikhefu lokungabikho kweleta evela kugqirha